तपाईंको फेसबुक कुन-कुन उपकरणमा खुल्लै छ? यसरी गर्नुहोस् लग-आउट :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
तपाईंको फेसबुक कुन-कुन उपकरणमा खुल्लै छ? यसरी गर्नुहोस् लग-आउट
फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये धेरैलाई आफ्नो फेसबुक कहिले खोलेको भन्ने ठ्याक्कै थाहा नहोला। यो थाहा भइहाले पनि कुन-कुन उपकरण (मोबाइल/ल्यापटप/कम्प्युटर)बाट लग-इन गरेको भन्ने याद नहोला। यसो गर्दा फेसबुक असुरक्षित हुन सक्छ। कसैले ह्याक समेत गरिदिन सक्छ। धेरैलाई 'लग-इन गरेँपछि लग-आउट गरिहालिन्छ नि' भन्ने हुँदो हो। तर कहिलेकाहीँ लग-आउट गर्न बिर्सिएको पनि हुन सक्छ।
तर तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले कुनै नयाँ उपकरण वा नयाँ ब्राउजरमा लग-इन गर्नुभयो भने त्यो विवरण फेसबुकले पनि राख्छ। यो फेसबुकको 'सेक्युरिटी एन्ड लग-इन' भन्ने विकल्पमा हुन्छ। जुन 'सेटिङ्गस' अन्तर्गत पर्छ।
यसरी हेर्नुहोस् तपाईंको फेसबुक कुन-कुन उपकरण र कुन-कुन ब्राउजरमा कुन स्थानबाट लग-इन भएको थियो/छ। र, आफ्नो फेसबुक सुरक्षित राख्न ती सबैबाट लग-आउट गर्नुहोस्।
- सुरूमा तपाईं फेसबुक एप अथवा ब्राउजरबाट फेसबुक खोल्नुहोस्
- फेसबुक खोलेपछि त्यसको 'सेटिङ्गस एन्ड प्राइभेसी' भन्ने विकल्प रोज्नुहोस्
- त्यहाँ तपाईंले सबैभन्दा माथि 'अकाउन्ट' भन्ने विकल्प देख्नुहुन्छ। त्यसभित्र 'पर्सनल एन्ड अकाउन्ट इन्फर्मेसन', 'पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी' र 'पेमेन्ट'को विकल्प देख्नुहुन्छ। त्यसमध्ये 'पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी' विकल्प रोज्नुहोस्
- अब यहाँ तपाईंले 'ह्वेर यू ह्याभ लग्ड-इन' अर्थात 'यी उपकरणमा तपाईंको फेसबुक खुल्ला छ' भन्ने खण्डअन्तर्गत तपाईंको फेसबुक लग-इन भएको उपकरण र स्थानहरूको विवरण पाउनुहुन्छ। अब आफूलाई थाहा नभएको ब्राउजर/उपकरणहरूबाट आफ्नो फेसबुक लग-आउट गर्नुहोस्।
अझ तपाईंलाई केही शंका लाग्छ भने यो पृष्ठको सबैभन्दा तल 'लग-आउट अफ अल सेसन' भन्ने विकल्प देख्नुहुनेछ। त्यसलाई चयन गरी सबै उपकरण/ब्राउजरबाट आफ्नो फेसबुक एकै पटक लग-आउट गर्न सक्नुहुनेछ।
वर्षौदेखि फेसबुक चलाइरहदाँ धेरैलाई कति ठाउँबाट फेसबुक लग-इन गरेँ भन्ने थाहा नहुन सक्छ। यसरी अब तपाईंले लग-इन भएका सबै उपकरण/ब्राउजरबाट फेसबुक लग-आउट गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, फेसबुक अकाउन्ट थप सुरक्षित राख्न प्रयोगकर्ताले बेला-बेलामा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुका साथै कडा पासवर्ड रोज्ने, डबल-अथेन्टिकेसन भेरिफिकेसन, अथराइज लग-इन, कोड जेनेरेटरजस्ता फेसबुक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८, ००:५०:००
काठमाडौंमा इन-ड्राइभरको सेवा सुरू, यात्रु आफैंले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने
यसकारण लोकप्रिय छ भिभोको भी-२३ संस्करण
भायानेटका ग्राहकले अब २०० एमबिपिएस इन्टरनेट ९९९ रूपैयाँ प्रति महिनामा पाउने
फोनपे आइएसओबाट प्रमाणीकरण
एफएफटीसँग ओपोको साझेदारी नवीकरण